Igumbi lakho lokulala e indlu esemaphandleni sinombuki zindwendwe onguRam & Nandini
URam & Nandini yi-Superhost
Kukho amagumbi amathathu (Hearth of Imphal 2 & Hearth of Imphal-Attic) [incwadi ngokwahlukileyo ukuba iindwendwe zingaphezulu kwe-2] kunye nomthamo wabantu abayi-5-6 (ihlawulwe ngomntu ngamnye). Iindwendwe zingasebenzisa iibhafu ezintathu eziqhelekileyo ezinamanzi ashushu, indawo yekhitshi enye, indawo yokutyela enye kunye nendawo eqhelekileyo eneencwadi ezininzi zokufunda. Akukho TV. Wi-Fi kuphela. Ingca enegadi yokutya & nechibi elincinci ziindwendwe ezivulekileyo. Buza ukuba uyafuna na ukunceda kwigadi yokutya. Ukuba uhlala nomntu ongamaziyo kwigumbi, kusenokufuneka wenze uhlengahlengiso.
ubumfihlo buhlonitshwa, akukho CCTV, ikhitshi iyafumaneka kwiti, ikofu eneketile eshushu. ukutya kwayo kwekhaya ukuba ufuna, indawo yokutya-yegadi, ukufikelela ngokulula uninzi lwe-imphal, hamba ukhwele induli/cheiraoching ngaphakathi kwemizuzu eyi-10 yokuhamba kwaye ubone eyona imphal.
iindawo zokutyela ezininzi, iivenkile zekofu kunye neekeyiki, iivenkile zamasebe, iindawo zokuzilolonga, iiCawe, ibhasi kunye neeteksi zifumaneka lula ngeenyawo, iimpawu zembali ezifana namangcwaba eMfazwe Yehlabathi II, iBala lemidlalo, iNduli yeCheiraoching yokubaleka kunye nombhiyozo wonyaka omtsha odumileyo wabantu baseMeitei.
Umbuki zindwendwe ngu- Ram & Nandini
inginginya iyafumaneka kwimibuzo kwizibonelelo, izalathiso, iiteksi, imisebenzi yendawo. Omnye okanye ngaphezulu umamkeli osoloko esekhaya. Uya kwazisa undwendwe ukuba bafuna ukuthatha inxaxheba kuyo nayiphi na iminyhadala. Ngenxa ye-COVID 19 unxibelelwano lwethu neendwendwe luza kuthintelwa
inginginya iyafumaneka kwimibuzo kwizibonelelo, izalathiso, iiteksi, imisebenzi yendawo. Omnye okanye ngaphezulu umamkeli osoloko esekhaya. Uya kwazisa undwendwe ukuba bafuna ukuth…